ချစ်သော… ပုဂံမြေ (သို့) ခင်ဇော်တို့နောက်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ချစ်သော… ပုဂံမြေ (သို့) ခင်ဇော်တို့နောက်လိုက်ခြင်း	13
ချစ်သော… ပုဂံမြေ (သို့) ခင်ဇော်တို့နောက်လိုက်ခြင်း
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on May 14, 2015 in Photography, Travel | 13 comments
သူငယ်ချင်း ခင်ဇော်တို့တွေ ပုဂံမြေအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေတင်တော့….
ကျွန်တော်လဲ ချစ်သောပုဂံမြေအမှတ်တရလေးတွေ တင်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်လာလို့ တင်လိုက်ပါတယ်…
မတောက်တစ်ခေါက်နဲ့မို့ မျက်စိနောက်ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…
ပုဂံမြေမှ ရှေးဟောင်းယောင်ဆောင်ထားသော ခေါင်းလောင်းလေးများ
တောင်ပေါ်သား says: မြင်ကွင်းကျယ် ၃ ကြိုက်သဗျ
kai says: အပယ်ရတနာ…လား.. အပ္ပါယ်ရတနာလား…။
ကြောင်ဝတုတ် says: အပ္ပါယ်ရတနာလို့ထင်တာပဲ သူကြီးရဲ့….
အဲဒါ ကျန်စစ်သားရဲ့ မိဘုရားနာမည်လဲ ဟုတ်မယ်လို့ ထင်တာပဲဗျာ….
Ma Ei says: ပုဂံမြေမှ ရှေးဟောင်းယောင်ဆောင်ထားသော ခေါင်းလောင်းလေးများ…ဆိုတဲ့
ခင်ဇော် says: ဟယ်.. သများးနောက် ဘယ်တုန်းးက လိုက်လာတုန်းးး
မြင်ကွင်းးကျယ်တွေ ကို ကြိုက်တယ် …
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အာ့ ပြောတာပေါ့….
Mike says: .ဂွတ်ဖိုတိုရှော့
အောင် မိုးသူ says: အပ္ပာယ်ရတနာ ဆိုတဲ့ ပုံကို ကြိုက်မိ
ကြောင်ဝတုတ် says: အစ်ကိုကြီးတောင်ပေါ်သားရေ…
ပုဂံမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ဖို့ ရွှေစေတီဆိုလားဗျာ အဲဒီဘုရားပေါ်တက်ရတယ်….
အစ်ကိုကြိုက်တဲ့ နံပါတ်(၃)ပုံက သဗ္ဗုညုဘုရားရော… အာနန္ဒာပါပါတယ်လေ…
ကျွန်တော်က နယ်စုံသွားနေတဲ့သူဆိုတော့ ရှေးဟောင်းနယ်မြေတွေကို…
ခြေချလိုက်မိတိုင်း အဲဒီလို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းယောင်ဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေ အမြဲတွေ့နေရသဗျ…
အဲဒါကြောင့် အဲဒီခေါင်းလောင်းလေးတွေကို ရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီလို နာမည်ပေးဖို့ စဉ်းစားမိတာပါ…
နောက်ကနေ အမြန်ကပ်လိုက်လာတော့ မမြင်လိုက်ဘူးထင်ပါတယ်….
ခင်ဗျားတို့ ပုဂံပုံတွေကြည့်ပြီး မအားလို့ ရွနေတာကြာပေါ့…
ရာသီဥတုပူတာနဲ့ အချိန်လဲ (၂)ရက်ပဲရတော့ ဓာတ်ပုံတောင် ကောင်းကောင်းမရိုက်လိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်…
Sunset လေးလိုချင်ပေမယ့် အကျိုးအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်ဘူးကွယ်…
ကင်မရာကို သေချာချိန်ပြီး လူရှင်းတဲ့အချိန်အမီစောင့်ခဲ့ရတာ…
ပုဂံခရီးရဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ပုံပါပဲ…
Alinsett @ Maung Thura says: ပုဂံကို … အရင်က သွားချင်တာထက် အခု ပိုသွားချင်လောက်အောင်ကို ပုံရိပ်တွေက ဆွဲဆောင်နေတယ်..
မြစပဲရိုး says: ပုံတွေကြည့်ပြီး ကိုယ့် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒဏ္ဍာရီ ကို လွမ်းသွားတယ်။ :-))
အပယ်ရတနာ လို့ ထင်ပါတယ်။
​ဒေါ် လေး says: ပုဂံ ကို​တော့ ဘယ်​ချိန်​ကြည့်​ကြည့်​ မရိုးနိုင်​​အောင်​ပါဘဲ
ကြောင်ဝတုတ် says: အလင်းဆက်ရေ….
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်… ပုဂံသွားတိုင်း ပုဂံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို ပြန်ခိုလှုံချင်နေတုန်းပါပဲ…
ပုဂံဆိုတာ မြန်မာဟေ့လို့… ဟစ်ကျွေးဆဲသက်သေတစ်ခုပေါ့ဗျာ…
အသောက်အစားမကင်းနိုင်တဲ့သူမို့ ယူရစ်အက်ဆစ်တက်ပြီး ပုဂံရောက်တဲ့အချိန်…
လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူး… အဲဒါကြောင့် ပုဂံမြေဓာတ်ပုံတွေသိပ်မရခဲ့ဘူးဗျာ…
ပုဂံဟာဘယ်တော့မှ မရိုးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအားမာန်ပါပဲ…